The call comes as the groups, Human Rights Watch (HRW) and Partnership Africa Canada (PAC), published what they say is a leaked document from the parastatal Mineral Marketing Corporation of Zimbabwe offering to sell more than $200 million (138 million euros) in illegal Marange diamonds through three Zimbabwean banks.
"This shows Zimbabwe was wilfully in breach of the universally respected ban on Marange diamonds," PAC research director Alan Martin told journalists.
Britain-based Barclays and South Africa-based Standard Bank both have multi-million dollar investments in the Commercial Bank of Zimbabwe, one of the banks suggested in the March memo as a vehicle to facilitate the illegal diamond sale, Martin said.
Gems from Marange, touted as one of the richest diamond finds of the decade, have been tainted by reports that the Zimbabwean military gunned down more than 200 local miners in 2008 and has set up a torture camp where locals are forced to mine the gems.
HRW says profits from the gems have gone to fund President Robert Mugabe's ZANU-PF party.
HRW senior researcher Tiseke Kasambala said Tuesday the area continues to be the scene of "barbaric" attacks by police and private security guards who have shot and beaten local miners and unleashed attack dogs against them.